မြန်မာကပေးရမယ့် ကြွေးမြီ ဒေါ်လာ ၅၈၅ သန်း နော်ဝေးနိုင်ငံ အစိုးရက လျော်ပစ်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စတုတ္ထအကြီးဆုံး မြီရှင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ နော်ဝေးနိုင်ငံ က မြန်မာနိုင်ငံက သူ့ကိုပေးဖို့ ရှိတဲ့ ကြွေးမြီအားလုံးကို လျော်ပစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဒီကနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက နော်ဝေးနိုင်ငံကို စုစုပေါင်းကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၈၅ သန်းကျော် ပေးဖို့ရှိပြီး ကြွေးမြီအားလုံးဟာ နော်ဝေးသင်္ဘောကုမ္ပဏီက တဆင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ကြွေးမြီတွေ လျော်ပစ်လိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒါဟာ နော်ဝေးနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို ပေးအပ်တဲ့ အကြီးမားဆုံး လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့ နှစ်နိုင်ငံစလုံးအတွက် သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းတစ်ခုလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ကြောင်း နော်ဝေး နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှု တိုးတက်ရေး ဝန်ကြီး Holmas က ပြောပါတယ်။
နော်ဝေးအစိုးရဟာ ၁၉၇၆ ခုနှစ် ကနေ ၁၉၈၀ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံပေါင်း ၂၁ နိုင်ငံကို သင်္ဘော ၁၅၆ စင်းနဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေကို အကြွေးရောင်းချ ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် အကြွေးပြန်မဆပ်နိုင်ကြတဲ့ နိုင်ငံတွေကို နော်ဝေးအစိုးရက ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကစတင်ပြီး ဒီကြွေးမြီလျော်ပစ်တဲ့အစီအစဉ် ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဗဟိုဘဏ် ဒေါ်လာငွေပေါက်ဈေး သတ်မှတ်ရောင်းချပေး
နော်ဝေး ရိုဟင်ဂျာ ညီလာခံ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို မဖိတ်ကြား
မြန်မာအစိုးရကို အမေရိက နဲ့နော်ဝေမှာ ဆန္ဒပြကြ
EU က မြန်မာကို ဒေါ်လာ သန်း ၉ဝဝ ကူညီမည်
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အချိန်ယူရမှာဖြစ်ကြောင်း နော်ဝေ ဘုရင် ပြောကြား
နော်ဝေဘုရင်နဲ့ မိဖုရား ဦးသိန်းစိန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်တို့နဲ့တွေ့
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ချေးယူဖို့ လွှတ်တော်သဘောတူ
အိန္ဒိယချေးငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လမ်းဖေါက်မည်
The goodwill of Norwiegian people is very remarkable. I would say it maybe is greater than the American's, but I maybe wrong. Also... when it comes to our turn to return the favor, say 20 years from now, Norway owes Burma millions of dollars, can we waive the money? Yes, it all depends on who the govt is and what kind of loan it would be: Just hypothetically presenting. Thank you, Norway!
ကြွေးမြီ ဒေါ်လာ ၅၈၅သန်း ကို နော်ဝေးနိုင်ငံအစိုးရက လျော်ပစ်ပေးပေမယ့် မြန်မာကြံခိုင်အစိုးရကတော့ လယ်သမားတွေကို ထမင်း တနပ်လျှော့စားပြီး ကြွေးကျေအောင်ဆပ်ဖို့ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်က အကြံပြု တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အကြံပြုချက်လဲ။ အကြွေးတွေကိုနိုင်ငံတကာကလျော်ပစ်၊ အကြွေးထပ်ယူပြီးပြည်တွင်းစစ်၊ထိုးစစ်အတွက်သုံး ၊ပြည်သူတွေကိုလည်ပင်းညှစ်အကြွေးတောင်း ကောင်းလိုက်တဲ့အစိုးရ ဒီလောကမှာရှားနေပါတယ်။
Feb 03, 2013 10:04 AM
Another good news for People of Myanmar.
Feb 01, 2013 03:19 PM